China 1.7m Width Kalandrie lamba famafana hafanana Press Machine milina sy mpamatsy | Asiaprint
1. Amboary ho azy ny toeran'ny lamba sy ny taratasy, mety amin'ny fanontana lamba mihodina, kasety lamba na lamba elo sns.
2. Mampiasa teknolojia vaovao, fanaraha-maso ny singa manafatra, tena marina.
3. Fanafanana marina, toerana mandeha ho azy, azo antoka ary mateza.
4. Ny kodia fanafanana dia mampiasa menaka mitana tombo-kase, azo antoka izy io. Ny maripana dia milamina kokoa ary maharitra.
5. Izy io dia mampiasa teknolojia fampivoarana solika mandroso sy fitarihana hafanana boribory, miaraka amin'ny fanafanana sy ny fitondra hafanana avo.
6. Tavoahangy famenoana solika ivelany sy valizy mihidy fiara manamora ny fanovana famindrana hafanana.
7. Famolavolana ny rafitra tsindry pneumatika mahatonga ny milina fanontana rotary hanao famindrana tonga lafatra.
8. Afaka mamela ny lamba firakotra ho fanitsiana mandeha ho azy, miantoka ny orbit mahazatra, manao ny fahombiazan'ny famindrana hafanana manatsara ny fitanana ny kalitaon'ny famindrana.
Fanontana fanoratana / amponga 1700 mm 67 inch
Savaivony 420 mm 16.5 santimetatra
Output misy naoty 25,5 KW
Hafainganana 0-8m / min
Haben'ny fonosana 2630 x 1390 x1600 mm
1, zahao raha malalaka na tsia ny visy rehetra amin'ny mainframe, hamafino raha malalaka.
2, Ny milina iray manontolo dia tokony hapetraka amin'ny haavo manana fahaiza-manao ampy; hazo frame mba overhead ny mikorisa kodiarana sy ny haavon'ny lalana no aleony.
3, fanapahana boriborintany mivoaka mifanaraka amin'ny masinin'ity milina ity miaraka amina tariby herinaratra 3 × 6 × 6 + 1 × 4 × 4. Ny crust ny masinina dia tsy maintsy vahana isan-karazany.
4, tazomy ny haavon'ny fitaovana mandritra ny fametrahana azy. Mampiasà fizarana 160 × 160 × 700 (halavany) hazo fandriana eo ambanin'ny sisin'ny kodiarana roa. Ampiasao ny fitaovana avo lenta hijerena raha avo lenta ny masinina na tsia.
5, Rehefa apetraka ny latabatra fiasa, ny haavony dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny lamba firakofana sy haavo. Ny famonoana taratasy (atsofoka ao) ny zana-kazo sy ny famahanana lamba (atsofoka) dia tsy maintsy mitovy ambaratonga amin'ny tanky fanafanana.
Momba ny serivisy aorian'ny fivarotana
A. Raha misy olana ny milina fanodinana hafanana amin'ny kalandrie dia afaka maka sary na horonan-tsary any amin'ny teknisianina ny mpanjifa.
B. Ny teknisiana dia hampianatra ny mpanjifa hanamboatra sy hampandeha ny milina fanodinana hafanana amin'ny alàlan'ny Internet.
C. Ary hangataka amin'ny mpanjifa izahay mba hamerina ilay tabilao izay tsy mety ny manamarina azy.
D. Minoa anay. Feno traikefa ilay teknisianina, ary mifandray hatrany amin'ny mpanjifa koa ny varotra.
Teo aloha: Milina fanontam-pirinty hafanana
Manaraka: Manan-tsaina Control Jersey Calandra Roll Heat Press Machine